Si ka duwan xeebaha more caanka Isbaanish of Ibiza iyo Mallorca, Platja de la Llosa waa xeebta xasilloon xeebta magaalada xeebta yar oo Cambrils. Perfect qoysaska ama lamaanaha raadinaya fasax nasasho. Xilbaa de la Llosa badan ee maqaayadaha iyo kafateeriyada dhow, iyo sidoo kale dalladaha iyo loungers kiro, musqulaha dadweynaha, iyo helitaanka kursiga curyaamiinta.
xeebta laftiisa ayaa durdurradiisa nin-dhigay yar in la xaddido hirarka iyo baddu. Marka lagu daro biyo diiran buluug cad, taas oo ka dhigaysa dabaasha iyo snorkeling aad u baashaal.
Ku yaal caan ah Algarve xeebaha, Praia Meia waa weyn ee gobolka Lagos iyo sidoo kale xeebaha our ugu weyn ee la heli karo by tareenada. Marka la barbar dhigo kale, qaybo ka mid dalxiis-ka buuxsantay oo ah Algarve more, Meia Praia waa abaabulan afar kiiloomitir-dheer oo ciid oo dahab qurux badan iyo is dajiyaan. Waxaa sidoo kale jira makhaayadaha iyo baararka lixdii bilood xeebaha. geesta galbeed ee xeebta waa wax yar ka soocay kuwii ay sabab u tahay u dhawaanshaha Lagos.
yaryar A, xeebta muuqdo on duurka, unspoiled xeebaha South-Western of France, Beach Senix (sidoo kale mararka qaarkood loo yaqaan Cenitz) waa meel ugu fiican ee surfers bilaabayso, qoysaska ama safra Solo. In wadnaha ee dalka Faransiiska Basque, dhexeeya Biarritz iyo Saint-Jean-de-Luz, Guethary duq ah oo soo jiidasho magaalada kalluumaysiga.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, ka dibna riix halkan: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-european-beaches-accessible-by-trains/ - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)